आयुष्मानले जलाए प्रियंकाको तस्बिर | Ratopati
आयुष्मानले जलाए प्रियंकाको तस्बिर
काठमाडौं– रियल लाइफमा आयुष्मानको इन्गेजमेन्ट औंठी लाइसकेकी अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले रिल लाइफमा भने धोका दिएकी छन् । गायक मोहन राईको बुधबार रिलिज गीत ‘मायाको खेल, आसुको भेल...’ को म्युजिक भिडियोमा प्रियंका र आयुष्मानबीचको विछोड देखाइएको छ । दिपेन्दनाथ शर्माको शब्द र कन्काइस्ट राईको संगीत रहेको गीतमा युवाहरुबीचको प्रेमपीडा प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा निर्देशक राजेन्द्र महर्जनले प्रियंका र आयुष्मान बीचको प्रेमकथा बुनेका छन् ।
बाटोमा लिफ्ट माग्ने क्रममा भेटिएकी प्रियंकालाई आयुष्मानले एकतर्फी माया गर्छ । पेसाले चित्रकार यिनले प्रियंकाको पेपर र पेन्सिल माध्यमबाट मुहारचित्र उतार्नेदेखि डान्स बारको नृत्याङ्गानासम्ममा प्रियङ्काकै अनुहार देख्न थाल्छ । जब आयुष्मानले प्रेम प्रस्ताव राख्छन्, प्रियंका बिच्किन्छिन् । यसपछि आयुष्मानले प्रियंकाको तस्बिर जलाउँछन् । निर्देशक महर्जनले म्युजिक भिडियोलाई कथानक रूपमा ढालेका छन् । पात्रहरुको बीचको तनाव सिर्जना गर्न उनी सफल छन् ।
एल्बम ‘मायाको खेल’ मा भने आठ छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको राष्ट्रिय भावको गीत ‘हिमालको पाखाभरि’ देखि व्याकुल माइला, दिनेश थपलिया, नवराज सिलवाल, राजा घले, मनु लोहारुङ राई, मुकेश राईसम्मका गीत छन् । संगीत शिखर सन्तोष, दिनेश सुब्बा, राजनराज शिवाकोटी र कृष्णभक्त राईले दिएका छन् ।
‘सूर्य इन्टरनेशनल अवार्ड’ १२ विधामा बाँडिने
डिज्नीकी स्टारले आखिर पोर्न फिल्म किन बनाउन थालिन् ?
ऋषिराजले अडिसनमार्फत ‘चुरिफुरि’ का कलाकार छान्ने
रणबीरसँग २२ जनवरीमा विवाह ! कार्डबारे सोध्दा हाँस्दै भनिन्, ‘अब म के भनौं ?’